I-Wiko iveza ezinye ii-Android ezimbini: iWiko Harry 2 kunye neWiko Jonga 2 kunye | I-Androidsis
UManuel Ramirez | | Ifa, Iiselfowuni, Izaziso
Uphawu lwesiFrentshi luyayithengisa kwaye ngoku lusizisa Iifowuni ezimbini ezintsha ze-Android: iWiko View 2 Plus kunye neWiko Harry 2. Bambalwa nje ngoku ababhengeze iWiko View 2 Go, Esithetha ngayo ngale migca iphakathi kwethu.
Kukwi-IFA apho athe wazisa khona Iifowuni ezintathu zazo Koku kungena sithetha la mazwi mabini. Ii-smartphones zilungelelene kakuhle kumaxabiso kunye nomgangatho kunye noyilo lwezinto zalo.
I-Wiko View 2 Plus sisiphelo esiza kufana ne- Ubhuti omdala weWiko View 2 Plus. Iza nescreen se-intshi eyi-5,932 nge-19: 2 HD Plus isisombululo somlinganiso, iprosesa engundoqo yesibhozo yeQualcomm Snapdragon 450 kwisantya sewotshi se-1,8 Ghz kunye ne-4GB ye-RAM.
Akusweleki nokuba Imemori yangaphakathi ye-64 GB kunye nebhetri ye-4.000 mAh yokukunika imfazwe eyoneleyo imini yonke. Iikhamera zihamba kunye ukubonakalisa ezimbini ngasemva nge-12 MP + 12 MP, kunye nephambili efikelela kwii-megapixels ezi-8.
El UWiko Harry 2 ungumzalwana omncinci ngescreen esingu-5,43-intshi 18: 9 HD + ratio, Mediatek MT6739WA quad-core chip clocked at 1,3 GHz and its 2 GB of RAM. Ukuba yeyona nto incinci kwezi zintathu zibonisiweyo, ikwabonakala kugcino lwangaphakathi kunye ne-16GB yayo (kunye nenketho ye-MicroSD njenge-2 Plus) kunye nebhetri ehlala kwi-2.900mAh.
Ayinabuso obuvulekileyo njengeWiko View 2 Plus, nangona ine-Dual SIM njengomntakwabo omdala. Zombini zine-Android 8.1 Oreo yokusifumana ngamaxabiso asusela kuma-99 euros eWiko Harry 2 nakwii-euro ezingama-199 zeWiko View 2 Plus.
Iifowuni ezimbini ezintsha ezivela kwiFrench brand Wiko ezifika zilungelelaniswe kakuhle kumaxabiso nakwiinkcazo. I-brand ethatha isikhundla sayo ukuzibonakalisa njengenye yeenkampani eziphambili zaseYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iifowuni ezimbini ezintsha ezivela kuphawu lwesiFrentshi: iWiko Jonga 2 kunye noWiko Harry 2
IFirefox iya kuqala ukuvimba iitracker trackers ukusuka kwi2019